प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दोस्रो चरणमा भिड्दै, को कति सुरक्षित ? – Everest Times News
प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु दोस्रो चरणमा भिड्दै, को कति सुरक्षित ?
२०७४ मंसिर १५, शुक्रबार ०६:४३
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा अन्तर्गत दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते गते हुदैछ । निर्वाचनमा देशका प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु विभिन्न स्थानबाट चुनावी भिडन्तमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट चुनावी प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एउटा मात्र क्षेत्र रहेको डडेल्धुरामा वाम गठबन्धनले उनीविरुद्ध माओवादी नेता खगराज भट्टलाई उठाएको छ ।
देउवाले भने जिल्लाबाट अहिलेसम्म चुनाव हारेका छैनन् । ०४८ यताका सबै निर्वाचनमा देउवाले यहीँबाट चुनाव जित्दै आएका छन् ।
देउवाले डडेल्धुराबाट आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै आएका छन् । उनी हाल चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री छन् । र प्रधानमन्त्री पदबाटै चुनाव लडिरहेका छन् । ज्योतिषले सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको दाबी गरेका देउवा यहाँबाट पाँच पटक निर्वाचत भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि दोस्रो चरणमा चुनावी भिडन्तमा छन् । झापा ५ बाट उम्मेदवार रहेका ओलीविरुद्ध नेपाली काँग्रेसले खगेन्द्र अधिकारीलाई उठाएका छन् ।
यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल काठमाडौं–२ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसले उनीविरुद्ध निवर्तमान सांसद दीपकप्रसाद कुईकेललाई उठाएको छ । यो क्षेत्रमा विवेकशील साझाका डा सूर्यराज आचार्य पनि चुनावी मैदानमा छन् ।
यता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलाम १ बाट उम्मेदवार रहेका छन् । उनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार बनाएका पूर्व क्षेत्रीय सभापति भुपेन्द्र कट्टेललाई उठाएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन ३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे उनका प्रतिस्पर्धी हुन् । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको चुनावी नतिजा प्रायको सुरक्षित देखिएको छ । चितवन ३ मा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भने राप्रपाका उपाध्यक्ष पाण्डे प्रतिस्पर्धामा रहेकाले कडा टक्कर पर्ने देखिन्छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई भने गोर्खा २ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । गोर्खामा पहिलो चरणमै मतदान भइसकेको छ ।